Dawaan Ibuprofen jedhamu umrii namaa hamma woggaa 10iin dheeressuu nimala jedhame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Dawaan Ibuprofen jedhamu umrii namaa hamma woggaa 10iin dheeressuu nimala jedhame
Dawaan hundi, hanga ani beekutti, dhukkubsataan akka fayyuufi dhibee irraa ufittisuuf kan nama tajaajilan. Amma garuu, dawaan, gara tajaajila umrii dheeressuutti kan tankaarfate fakkaata, akka qorannoon haarofni tokko mul’isetti.
Qorannoon biyya Ameerikaatti dawaa ‘Ibuprofen’ jedhamu irratti geggeeffame kan agarsiise, dawaan kuni faaydaa fayyaa ganna hedduuf kennaa ture bira dabree gara tajaajila umrii dheeressuutti ce’eera. Dawaan Ibuprofen, kan namuu ajaja doktoraan alatti duukaa kamuu bitachuu danda’u kuni, umrii sanyii bineensota hedduu dheeressuu kan danda’e ta’uu isaati qorattoonni kan mirkaneessan.
‘Jalqaba rushii [yeast] irratti yaalle. Rushiin ykn racceetiin ibuprofen fudhatte umrii dheeraa jiraatte. San booda raammoofi bararoo irrattis yaalii yoo goonu bu’ama wolfakkaataa argine. Dabalataanis, lubbu qabeeyyiin kunniin umrii dheeraa jiraachuu qofa osoo hintaane, fayya-qabeeyyiis ta’aniiti kan mul’atan,’ jedhe Dk. Mikaa’el Polimenis qorataan AgriLife.
Dawaan lubbu qabeeyyii kanniiniif akka humna isaaniitti kenname kuni umrii isaanii hanga 15% dabaleeti kan argame. Nama biratti kuni edaasaa woggaa darzana tokkootti (10+) tilmaamama jechuudha.
Ibuprofen akkamitti umrii lubbuqabeeyyii dheeressuuf danda’e gaafii jedhuuf deebiin salphaafi qajeelaan ammatti hinjiru. Saayinsistoonni ammatti wonti beekan yoo jiraate,garuu, ibuprofen seelonni waan ‘tryptophan’ jedhamu akka fudhatan godhuu isaati. Tryptophan amiinoo asiidii seelii lubbuqabeeyyii hunda keessatti argamuudha. Tryptophan ilma namaatiifis waan baay’ee barbaachisaadha. Kan argamus nyaata keessatti.
Ibuprofen dawaan tolaa [safe] namoonni woggaa hedduuf fudhataa turaniidha. Hanga qorannoon kuni tajaajila biraa qabaachuu isaa mirkaneessetti, Ibuprofen dawaa dhukkubbii salphisuufi oo’a qaamaa hir’isuuf nammoonni dhimma itti bayaa turaniidha- akkuma parasetaamoliifi aspiriinii jechuudha.
Dawaan ibuprofen bara 1960mman gara jalqabaa keessa kan biyya Ingiliiziitti hojjatame. Dhaabbanni Fayyaa Addunyya [WHO] ibuprofen tarree dawaa baay’ee barbaachisoo jedhaman keessatti kan ramadeeru.
dawaa umrii dheeressu
Previous articleHermaan Koon, itti aanaa ministera haajaa biyya-alaa Ameerikaa duraanii Itoophiyaan filannoo bilisaafi madaalwaa geggeessuu qabdi jedha
Next articleMaxxansaan Afaan agarsiisa kitaabaa magaalota heddu keessatti geggeessuuf